Murozvi ndiChigovanyika : Sekuru's Stories Murozvi ndiChigovanyika : Sekuru's Stories
Saka Murozvi akanzi ndichigovanyika. Dai iri nguva ino aifanira kuitwa Minister weLand. Asi Murozvi nokuti vainzi, “Watipedzera uchi, hauna chii? Hauna hwize. Hauna hwacheumambo uyauya unonzi hwize. Saka hwize yako iwewe idemo, kuti kana munhu wese anenge apinda muno munyika, ndiwe unomutemera mugano. Ndoushe hwako.”
Saka ndiye anga ari Minister weLand iyaiya. Ndiye aiziva kuti, “Munhu agere apa, mugano wake unosvika papi, munhu agere apa, mugano wake unozvika papi.” Nokuti zvainzi, “Ndiwe watirozva, wadya uchi wese, watipedzera uchi.”
Saka ndobva vazodii? Vazogara muno vachingopararira, vachingopararira. Vaiti vavainawo, “Mumwe ngaagare apa.” Chigovanyika ari pano achingotema mugano, “Iwewe uri mambo, nzvimbo yako iyi. Iwewe nzvimbo yako iyi, iwewe nzvimbo yako iyi,” kusvikira vese vakwana nzvimbo.
Zvokuti ivo kutaura kwavo, vanhu vemuno muZimbabwe, taida kupamba nyika. Taitora kubva Mozambique kunosvika kuZambia.
Barotseland yese inyika yeVaRozvi. Luwanika aive MuRozvi akabva muno, saka ndobva anogara kuZambia. Saka kare kwaive nemadzimambo maviri. Akabva nekuMalawi ainzi Mwase, naLuwanika akabvawo nekuZimbabwe. Saka yaingove nemadzimambo maviri.
Saka kugara kwavainge vakaita, ukoko vaiti Marozi, kuno uku tinoti Marozvi, asi vese vanoera moyo. Kuno uku vakabva vachinzi Moyo Mateere, uko ndobva vati Moyo Mate, havana kuzopedzisira kuti Mateere. NdoVaRozvi, ehe. Saka yese province yacho inonzi Barotseland iprovince yeMaRozvi, ichibva kuno uku kuMosi Oatunya kuno uku, ichinosvika uko.